Thursday January 13, 2022 - 08:16:01
qaraxii lagu beegsaday saraakiisha caddaanka ayaa ka dhacay goob xasaasi ah
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixisay qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee shalay ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Cali Yare oo ah guddoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda iyo amaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 5 askari ayna ku dhaawacmeen 5 qof shacab ah.
Wuxuu carabaabay in gaariga walxaha qarxa lagasoo buuxiyay uu ku qaraxy meel ku dhow xerada Afisyooni oo ammaankeeda si aad ah loo adkeeyo.
Afhayeenka booliska DF-ka ayaa isna war uu soo saaray ku sheegay in qaraxii shalay lagu beegsaday saraakiil caddaan ah ayna jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaartay qolyaha ajaanibta ah ee labeegsaday balse aysan hayn tirada rasmiga ah ee ka dhimatay caddaanka.
Al Shabaab "2 sarkaal American ah ayaa ku dhintay weerarkii naf-hurnimo".
Dhinaca kale taliska ciidanka Al Shabaab ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay weerarkii aadka uxooganaa ee shalay ka dhacay wadada 21-ka October ee degmada Waaberi.
"Camaliyadii istish-haadiga aheyd waxaa ku dhintay 2 sarkaal American ah halka ay ku dhaawacmeen 2 kale" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay taliska ciidanka XSHM.
Wararka ayaa intaas ku daraya in saraakiishii caddaanka ahaa ee ku dhaawascmay qaraxii shalay loo qaaday dalka Jabuuti halkaas oo lagu dabiibayo, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladda Mareykanka oo ku saabsan khasaaraha muwaadiniinteeda kasoo gaaray qaraxii Muqdisho.
Marka la eego xasaasiyadda goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa muuqata in sirdoonnada DF-ka iyo kuwa caalamiga ah ay ku fashilmeen sugidda ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.